Thousands of Oromo students, health professionals and workers are protesting in Western Oromia.They are demanding the government to take action. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsThousands of Oromo students, health professionals and workers are protesting in Western Oromia.They are demanding the government to take action.
Amboo: Sadaasa 30/2018 Gidduugaleessa Oromiyaa Magaalaa Ambootti Hiriira mormii yakka ajjeechaa suukkaneessaafi qe’eerraa buqqa’uu uummata Oromoo irratti gaggeeffama jiru mormuun yeroo amma gaggeeffama jira. Akkasumas Saamicha lafaafi qe’eerra buqqisuu maqaa Master Planii Finfinneen eegalamee itti fufee jiraachuu isaa mormuun master plan 2ffaan Finfinneefi magaalota Naannawaa Finfinneetti gaggeeffama jiruu atattamaa haadhaabbatu jechuun yeroo amma dhaadannoowwaan:
-Lafti keenya lafee keenya, Samichi lafaa ijaarsa mana Kondominiyeemi haa dhaabbatu
-Yakki ajjeechaa Uummata Oromoo Lixa Oromiyaa wallaggaafi Baha Oromiyaa Harargee irratti gaggeeffama jiru atattamaan haa dhaabbatu.
-Yakka ajjeechaa miseensota Poolisii Oromiyaafi miseensota WBO irratti fudhatame ni balaaleffanna!! Kanneen yakka ajjeecha kana rawwataniifi uummata keenya ficisiisaa jiran seeraatti haa dhiyaatan jechuun sagalee isaanii dhageesisaa jiru.
Sadasaa 30/2018 sibuu siree : Ajeechaa uummataa oromo haa dhabatuu
Ajechaa uummata lammi oromo irrati taa jiruu baalalefacha jiru
Gimbii-Uummatni magaalaa Gimbii ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamu mormudhaan hirira mormii gaggeessaa jiru.
Angar-Guutee: Sadaasa 30/2018-Hojjetoonni mootummaa , baratoonnii fi jiraatonni magaalaa Angar Guutee ajjeechaa lammilee nagaarra ga’aa jiru dhabbachu qaba jechuun hiriira geggessaa jiru .
Qeellam wallaggaa laaloo Qilee
Najjoo-Uummatni magaalaa Najjoo ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamu mormudhaan hirira nagaa gaggeessan.
Shirri guddaan keessaa fi alaan jiru qulqullaa’uu qaba; Waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa keessattis dabni hojjatamaa jira; meeshaan gahaa humnoota poolisii fi kora bittineessaa gama Oromiyaa lixaa jiraniif akka hin ergamne dhiibbaan godhamaa jiru hatattamaan sirreeffamuu qaba.
Waan jarattiin wayyaanee wajjiin waggaa 27 nu godhaa baate dhaggeeyfadhaa.
Ani ijumaan wayyaaneen laaluuniin isaan kanaas laala!!!!
የጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት የፕረስ ሴክሬተሪ እየሰጡት ያለውን መግለጫ ቀጥታ ይከታተሉ።